Syria: “Damaskaosy ity!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2012 0:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Ελληνικά, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny tatitray manokana momba ny Hetsi-panoherana ao Syria 2011/12.
Miaraka amin'ilay ady izay tsy mampiseho mihitsy marika fisiàna fitonitoniana, ary ny serasera manjary miha-sarotra na tsy azo antoka intsony, nisy “fanentanana niainga tampoka izany ho fanehoana firaisankina [ar] amin'ireo vahoaka Siriana voatampim-bava” natomboka tao amin'ny aterineto.
Tanaty hetsika iray hanehoana firaisankina amin'ny vahoaka Siriana, nanomboka nibitsika teo ambanin'ny tenifototra “#هنا_دمشق”, dikanteny Arabo amin'ny hoe #This_Is_Damascus (Damaskaosy ity) ireo mpisera amin'ny aterineto. Nandritra ireny fotoanan'ny fahirano sy ny fahatapahana ireny, ireo olona avy amin'ny tanàn-dehibe rehetra maneran-tany dia nasaina daholo hanolotra fialokalofana vonjimaika ho an'i Damaskaosy.
Ilay fanentanana dia fampahatsiahivana ny antso “Avy aty Damaskaosy… Kairo ity!”, izay nalefa avy any Syria rehefa tonga tamin'ny fara-tampony ny Adin'ny Arabo sy Israeliana tamin'ny 1956 fony nanafika ny foibe fanapariahana ny Radio Cairo ireo fiaramanidina mpiady an'ny Frantsay sy Britanika, niezaka ny hanàkana ny fakàn'i Ejipta notarihan'i Nasser ny Lakandrano Suez ho fananam-pirenena, nahavitan-dry zareo nampangiana tanteraka ny fandefasam-peo Ejiptiana.
BSyria mibitsika hoe:
Ny olona sasany avy ao Syria dia afaka ihany koa nirotsaka an-tsehatra tamin'ilay fanentanana. Toy ny tamin'ny 2011, Google sy Twitter dia namerina namelona indray ny Speak To Tweet, tolotra iray ahafahan'ireo mpampiasa azy mampakatra bitsika amin'ny alàlan'ny feony amin'ny fiantsoana laharan'antso iray iraisampirenena ary mametraka hafatra am-peo, tahaka ity mpiantso tsy nitonona anarana ity izay niteny fotsiny ny hoe :
“This is Damascus!” (Damaskaosy ity!)
farooos manoratra hoe:
Rime Allaf manoratra hoe:
Razan Ghazzawi manoratra hoe:
Sarab mibitsika hoe:
Taher Ishaid manampy hoe [ar]: